Umvelisi ogqwesileyo weDesander kunye neFektri | SINOVO
I-desander sisiqwenga sezixhobo ze-rig ezenzelwe ukwahlula isanti kulwelo lokomba. Izinto eziqinileyo ezirhabaxa ezingenakususwa zihlukuhli zinokususwa yiyo. I-desander ifakwe ngaphambili kodwa emva kwe-shaker kunye ne-degasser.
Umthamo (oluludaka) (m³ / h)
Sika indawo (μm)
Ukwahlulahlula amandla (t / h)
Ubukhulu (m) LxWxH
I-3.54 × 2.25 × 2.83
I-4.62 × 2.12 × 2.73
Singumvelisi we-desander kunye nomthengisi eTshayina. Uthotho lwamanqaku ethu e-SD asetyenziselwa ukucacisa udaka kumngxunya wokujikeleza. Uthotho lwe-SD desander Izicelo: Amandla e-Hydro, ubunjineli bezobunjineli, isiseko se-D-wall, i-Grab, ngqo kunye nokubuyisa umngxunya wokujikeleza okujikelezayo kunye nokusetyenziswa kunyango lokuphinda kusetyenziswe i-TBM. Inokunciphisa iindleko zokwakha, ukunciphisa ukungcoliseka kwendalo kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle. Sesinye sezixhobo eziyimfuneko kulwakhiwo lwesiseko.
Ukusetyenziswa kwakhona kwe-slurry kulungele ukonga izinto zokwenza i-slurry kunye nokunciphisa iindleko zokwakha.
Imowudi yokujikeleza evaliweyo ye-slurry kunye nomxholo wokufuma omncinci we-slag kuyanceda ukunciphisa ungcoliseko lokusingqongileyo.
Ukwahlula okusebenzayo kwe-particle kunenzuzo ekuphuculeni ukusebenza kakuhle kwepore.
4.Ukucocwa ngokupheleleyo kwe-slurry kulungele ukulawula ukusebenza kwe-slurry, ukunciphisa ukunamathela kunye nokuphucula umgangatho wokwenza iipore.
Ukushwankathela, uthotho lwe-SD yokuhambahamba iyanceda kulwakhiwo lweeprojekthi ezifanelekileyo ezikumgangatho ophezulu, ukusebenza ngokukuko, uqoqosho kunye nempucuko.
Umsebenzi olula wokungcangcazela isikrini unezinga lokusilela okuphantsi kwaye kulula ukufaka, ukusebenzisa kunye nokugcina.
2.Ukuhamba phambili komgama wokungcangcazela kwesikrini kwenza ukuba i-slag ehlolwe kwi-screen ibe nefuthe elihle lokuphela emzimbeni.
Isikrini esingcangcazelayo sinokusebenza okuphezulu kwaye sinokusetyenziselwa ukubhola izixhobo ezahlukeneyo zokomba kwimigangatho eyahlukeneyo.
Ingxolo yesikrini sokungcangcazela iphantsi, enokuthi iphucule imeko yokusebenza.
5. Amandla e-centrifugal ehlengahlengiswayo, i-engile yendawo yesikrini kunye nobungakanani bomngxunya wesikrini
igcina ukusebenza kakuhle kokuhlola kuzo zonke iintlobo zendlela.
6. Impompo oluludaka enganyangekiyo centrifugal oluludaka luphawulwa isakhiwo phambili, iphezulu, ukusebenza oluthembekileyo kunye nofakelo lula, disassembly kunye nokugcinwa; iindawo ezinxibayo ezinxibayo kunye nesibiyeli esinzima zenza ukuba zilungele ukuthuthwa kwexesha elide lokukrala okunamandla kunye nokuxinana okuphezulu
7. I-hydrocyclone eneeparameter zesakhiwo esineempawu eziphambili zokwahlula islurry. Izinto eziphathekayo ziyakunxiba, zinqabile kunye nokukhanya, ngoko kulula ukusebenza kunye nokulungelelanisa, ukuhlala ixesha elide kunye noqoqosho. Kuyafaneleka ukugcinwa kwexesha elide ukusetyenziswa kwamahhala phantsi kweemeko zokusebenza ezinzima.
8. Isixhobo esitsha sokulinganisela esizenzekelayo senqanaba lolwelo asinakugcina kuphela inqanaba lolwelo lwetanki yokugcina lizinzile, kodwa liyakuqonda unyango oluphindaphindiweyo lweslurry kunye nokuphucula ngakumbi umgangatho wokuhlanjululwa.
9. Izixhobo zinezibonelelo zomthamo omkhulu wonyango oluludaka, ukusebenza okuphezulu kokususa isanti kunye nokuchaneka okuphezulu kwesahlulo
Egqithileyo I-SD2200 Super Rig
Okulandelayo: XY-1 Core Ukubhola Rig
Ukuhamba kakuhle kwentloko